Hagaha ugu dambeeya ee la socodka sumcaddaada internetka | Martech Zone
Dadweynihii wanaagsanaa ee ku sugnaa Trackur waxay isku keeneen macluumaadkan ku saabsan sida loo sameeyo kormeer shaqsi ahaantaada ama magacaaga sumcadda internetka. Tallaabooyinka ay cayimayaan:
Aqoonso sumcaddaada - kormeer magacyada magacyada magacyada, magacyada shirkadaha, magacyada wax soo saarka iyo kala duwanaanshaha.
Tira koob dhagaystayaashaada - yaa saami ku leh sumcaddaada internetka?
Faham himilooyinkaaga - sidee ayaad u cabbiri doontaa haddii sumcaddaadu ay soo fiicnaaneyso iyo in kale?
Sheeg baahiyahaaga - qalab noocee ah ayaad ubaahantahay iyo ilo noocee ah ayaad ubaahantahay inaad kormeerto?
Sidee u kormeeri doontaa? - waa maxay geedi socodyada jira si looga digo oo looga jawaabo arrimaha?
Ayaa kormeeri doona wada hadalada? - yaad ku aaminaysaa maaraynta iyo ka jawaabida arrimaha sumcadda internetka?
Tags: hanuuniyoinfographicsumcadda internetkakormeerka sumcadda internetkahagaha sumcaddailaalinta sumcaddatrackur
Feb 8, 2013 markay ahayd 9:27 PM
Feb 8, 2013 markay ahayd 9:30 PM
Waad sharadaysaa @andybeal: disqus! Sii wad shaqada weyn.
Febraayo 10, 2013 saacadu markay tahay 1: 45 AM
Waad ku mahadsantahay macluumaadka weyn ee Doug, waxaan haystaa feejignaan aad ufiican markaan fiirsado markay wax yaalo sawiro iyo midabbo qurxoon! 😉
Waad ku mahadsantahay boostada,
Febraayo 13, 2013 saacadu markay tahay 2: 51 AM
Nabade Douglas. Aragtidaadu waxay muujineysaa sida sumcadda ganacsiga qadka uu muhiim u yahay. Waxay bixisaa soo koobitaan si loo qiimeeyo dhammaan xaglaha ganacsiga gaar ahaan maalgashadayaasha kuwaas oo ah dhaliyaha dakhliga ee ganacsiga